Miyuu Paul Pogba diyaar u yahay inuu heshiiska u kordhiyo Kooxdiisa Manchester United? – Gool FM
Haaruun July 4, 2020
(Manchester) 04 Luulyo 2020. Laacibka khadka dhexe ee Paul Pogba ayaa la soo warinayaa inuu ku farraxsan yahay inuu heshiiska u ballaariyo Kooxdiisa haatan ee Manchester United.
Tan iyo markii la muujiyey bishii June ee sanadkii 2019-kii inuu doonayey inuu rabo inuu raadsado tartan cusub, ku guuleystaha Koobka Adduunka waxaa si joogto ah loola xiriirinayay ka bixitaanka garoonka Old Trafford.
Inkastoo Man United ay ku jirto meel ay ku dheereyn karto qandaraaska 27-sano jirkaan oo ah ilaa sanadka 2022-ka, waxaa la soo jeediyay in mas’uuliyiinta kooxda aysan weli go’aan ka gaarin sii haysashada xiddiga heerka caalami ee dalka France.
Si kastaba ha noqotee, sida ay warinayso Jariiradda ESPN, Pogba wuxuu doonayaa inuu sii kordhiyo sii joogista Magaalada Manchester, isagoo la dhacsan nolosha Waqooyi-galbeed England, kaddib markii uu dhowaan ka soo laabtay maqnaansho dheer.
Guushiisii ugu dambeysay ee Premier League, kubadsameeyahan ayaa si fiican ula falgalay xiddiga bishii Janaayo Kooxda ku soo biiray ee Bruno Fernandes, waxaana hadda taasi sidoo kale ay ku riixday inuu sii joogo Kooxda Man United sida warbixinta lagu sheegay.
Waxa ay u muuqataa haatan in Pogba uu raadinayo inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo Man United, halkii uu baadi goobi lahaa u dhaqaaqista midkood Kooxaha Real Madrid ama Juventus.